HomeTURKEYGobolka Marmara54 SakaryaMiyaaney Sapanca Cable Carrant Gawaarka Soo Celiyay Laaluush?
04 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 54 Sakarya, GUUD, Gondola, Gobolka Marmara, TURKEY, TELPHER 0
Rashiirku wuxuu kudhacay jilicsanaanta gaadhiga fiilada Sapanca
Bursa Teleferik A.Ş. Maareeyaha guud Burhan Ozgumus, 1 million TL laaluush ah ayaa loo siiyay maayarka si loo helo wararka xanta ah ee la soo gudbiyay, isagoo sheegay inaysan run ahayn, ayuu yidhi.
Ozgumul, maalin ka hor gudoomiyaha gobolka CHP Sakarya gudoomiyaha gobolka ee laxiriira eedeymaha suaasha ah, "yaa dhaha kan, (Kaalay ha cabsan, laakiin adigu kama cabsaneysid Ilaah) waxaan iri" ayuu yiri.
Kadib qandaraaska, Burhan Özgümüş wuxuu u sheegay inay lacag siinayeen labo meelood waxuuna yiri, "Waxaan iibsaday mid ka mid rinjiyeyaasha Dugsiga Hoose ee Hasanpaşa 2 kun oo rodol. Waxay kaloo yiraahdeen, “Xaalada dhaqaale ee Sapancaspor aad ayey u xuntahay, 5 kun oo ginni ayay igu siinayaan beddel rasiid ah. Tan kale, ma jirto lacag gaar ah ..
Isagoo caddeeyay inay dhaawaceyaan mashruuca Ozgumus, "Degmadda (Waxaan sameeyay meelaynta goobta. Wax dhibaato ah ma ila qabtaa? Maya, maxaa halkan looga bilaabi waayey") ayaa yidhi. Waxaa kale oo jira heshiis noocan oo kale ah oo maalin kasta oo aan dib u dhigo waxaan ku bixinayaa magdhowga 820 kun oo rodol. ”(Nurettin Eryilmaz / Sakaryadeena)
Madaarka madaarka miyuu ku soo noqonayaa caadi ahaan Ankara? 02 / 04 / 2018 Duqa magaalada Mustafa Tuna, oo ka hadlayay shilkii dhacay ka dib markii ay isku dhaceen laba tareen ah intii lagu jiray baaritaankii madaarka Ankara ee maalintii hore, ayaa sheegay in Twitter-ka ay dayacday shaqaalihii la iska daayay shilkii subaxnimadii Sabtidii. Duqa magaalada Ankara Mustafa Tuna oo ah xarun koonfureed oo Kizilay-Batıkent ah ayaa sii wadi doonta socodka caadiga ah ee safarka sida lagu soo xigtay Tuna, Twitter-ka qaybtiisa uu ka soo jeedo, ayaa lagu sheegay in ay dhammaatey shilkii Sabtidii ka dib markii shaqada dayactirka. Tuna waxa kale oo ay sheegtay in aysan jirin wax dhibaato ah oo ku yimid duulimaadyada; Subaxnimadii Sabtida ee ku saabsan shilkii subway ee 5.30 ...
Sapanca Geyve YHT Line Shirkadda 'Fesat' Claim ee Baarlamaanka 16 / 11 / 2017 Ku-Xigeenka CHP Konya Hüsnü Bozkurt wuxuu hirgeliyey hindise-gaabinta anca Sapanca Geyve Line-tareenka Xawaaraha Sare ee ugu sarreysa Agenda Agoosto. Bozkurt, oo ka codsaday ra'iisul wasaaraha Binali Yıldırım oo ku saabsan eedaymaha loo soo jeediyay dadweynaha ku saabsan hindisada, ayaa sheegay in sida laga soo xigtay qaar ka mid ah shirkadaha codsaday ka qaybqaadashadu aysan ka gorgortamin hannaanka gorgortanka, hindisaha ayaa isku dhafan, habsocodka hindisada ayaa si aan macquul ahayn loo fuliyay oo shuruudaha qandaraaska looguma martiqaadin. muujiyeen, sidaas oo jilicsan by the Republic of Turkey Tareennada State 1 998 kun oo milyan oo billion 999 223 sheegay in qiimaha asalka ah ee TL Construction u noqon. "Sapanca-Geyve High Speed ​​...
Wasaaradda Tareenada ee India oo Iska Casilay Sababo La Xiriira Qodobbada Lahaanshaha 11 / 05 / 2013 Wasaaradda Gaashaandhiga ee India ayaa Isniintii iska casilay xilka wasiirka garsoorka ee Hindiya Kumar Bansal ka dib markii qaraabadiisa lagu eedeeyay laaluush. Bansal wuxuu u sheegay suxufiyiinta ka dib markii fadeexad laga soo daayay telefishanka dawladda in ra'iisal wasaaraha Manmohan Singh uu is casilay. Hoggaamiyeyaasha mucaaradka ayaa sheegay in qaraabada Bansal ay ku hodmeen iyagoo adeegsanaya xiriirka ay la leeyihiin wasaaradda. Baarayaasha federaalka, Bensal's adeer Vijay Singla, 166 kun oo doolar si ay u laaluushaan maamulka jidka tareenka ee shaqada loo haysto, oo ay ku jiraan shaqaale wasaaradda shaqaalaha Mahesh Kumar 5 ayaa la qabtay. Telefishanka ayaa sidoo kale ku booriyay Xisbiga Congress-ka in uu dib u qoro hindise-sharciyeedka warbixinta baaritaanka heshiiska iibinta ee jiilka
Lacag laaluush maaha deynta 13 / 01 / 2014 Laaluush ma deymin lacagta: Izmir ee 'İmbat howlgalka laaluush iyo weedho tuhmane oo loo xiray ku shubatay gundhigga lacag ma aha gaadiidka laaluush u dhexeeya kasta oo kale, waxay ku soo jeediyay in lacagta amaahatay. Qaar ka mid ah kuwa 14 ee lagu xiray howlgalkii musuqmaasuqa ee ka dhanka ah Maamulka Dekedda ee TCDD ee ku yaalla Izmir ayaa la yiraahdo "Im Imbat Wave" ayaa maxkamad soo taagey. Ganacsatada MCB ayaa sheegay in hawlgalku uu ahaa mid siyaasadeed, wuxuuna intaa ku daray in markhaatiyadiisa ay tahay in tallaabo taxadar ah la geliyo warshadda sababta oo ah eedeeymaha. Dhibaatada iyo ciqaabteyda waan la kulmay mar kasta. Wasiirkii hore ee gaadiidka Binali Yildirim, guurkaygu waa markhaati. Sababtoo ah codsi uu u direy degmada weyn ee magaalada 4 Onun
Lacagtii oo ku taal kiiska IZBAN (Video) 04 / 02 / 2013 Lacagtii IZBAN ee kiiska duqa magaalada Aziz Kocaoglu 'Hoggaamiye Kooxeed' oo ku saabsan awoodda maxkamadaynta, 130 oo loo diyaariyay Metropolitan Case, faahfaahin muhiim ah oo ku saabsan warbixinnada khabiirku u muuqday. IZBAN Soo bandhigida filimkan iyo baaritaanka filimkan ee cinwaanka 32, khabiirada loo xilsaaray in ay eegaan faylasha gundhigga, shirkadda wax soo saarka filimka ayaa dalbatay maamulayaasha eedeeysanayaasha 125 kun oo gardaro oo aan awoodin in ay helaan jawaab togan oo warbixinta la diyaariyey. Muzaffer Uzlaş, oo ah qareenka shirkadda Sportsnet, ayaa markii ugu horeysay kalsooni ku qabay iyaga oo la soo xiriiraya email-ka iyo muujinta dabeecad wanaagsan.
Madaarka madaarka miyuu ku soo noqonayaa caadi ahaan Ankara?
Lacag laaluush maaha deynta
Lacagtii oo ku taal kiiska IZBAN (Video)
Shaki kuma jiro in Guryaha Bulshada ee Magaalada Alanya ...
STM ayaa la filayaa in lagu martiqaado qandaraaska cusbooneysiinta cusbooneysiinta ee Balcova Cable Car Facilities
Marxaladda labaad ee hirgelinta gawaarida tikidhada ayaa la dhammeeyaa
Waxaa jira wax shaki ah oo ku saabsan hindisada mashruuca Alanya Cable Cable Carwada ...